Akụkọ - Ihe nkedo a bụ nke nwere ọtụtụ fiberglass pụrụ iche impregnated na resin.
1.Nnukwu ike na ịdị arọ: Odidi nke splin mgbe ọ gwọchara ya bụ okpukpu iri abụọ nke plasta ọdịnala. Njirimara a na-achota ihe kwesiri ntukwasi obi ma guzosie ike mgbe edozichara. Ihe mmezi ahụ dị ntakịrị ma ibu ahụ dị ọkụ, ya na 1/5 nke ibu nke plasta na 1/3 nke ọkpụrụkpụ nke nwere ike ime ka mpaghara ahụ emetụtara belata obere, belata ibu na mmega ahụ arụmọrụ mgbe emechara, kwado ọbara na-akwalite ọgwụgwọ.
2. Porous na ezi ikuku permeability: The bandeeji eji elu-edu raw yarn na pụrụ iche ntupu ịkpa ákwà na nkà na ụzụ nke nwere ezi ikuku permeability.
3.Hargba ọsọ ọsọ ọsọ: Usoro nkụchi nke bandeeji dị ngwa. Ọ na-amalite imesi obi ike 3-5 nkeji mgbe ọ mepechara ngwungwu ma ọ nwere ike iburu ibu na nkeji iri abụọ ebe akwa akwa a na-ewe ihe dịka elekere 24 iji mezuo ma buru ibu ahụ.
4. Ihe ngosi X-ray dị mma: Banyere bandeeji nwere oke radieshon na-emetụta ya na mmetụta X-ray doro anya nke na-enyere dọkịta aka ịghọta ọgwụgwọ nke akụkụ ahụ metụtara na oge ọ bụla n'oge usoro ọgwụgwọ ahụ.
5.Ezigbo mmiri na-eguzogide: Mgbe ihe bandeeji siri ike, elu ahụ na-adị larịị na mmiri na-adọrọ adọrọ bụ 85% dị ala karịa akwa ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ekpughere akụkụ ahụ emetụtara na mmiri, ọ nwere ike ijide n'aka na mpaghara emetụtara emetọ.
6. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, mgbanwe, ezigbo plasticity
7.Nkasi obi na nchekwa: A. Maka ndị dọkịta, (akụkụ ahụ dị nro nwere mgbanwe ka mma) nke a na-eme ka ndị dọkịta nwee ike itinye ya n'ọrụ. B. Maka onye ọrịa ahụ, bandeeji nwere obere mkpụmkpụ ma ọ gaghị ewepụta mgbaàmà na-adịghị mma nke mgbatị akpụkpọ anụ na itching mgbe akwa nkedo gachara.
8.Ngwa dị iche iche: idozi mpụga orthopedic, orthopedics maka orthopedics, ngwa ọrụ na-enye aka maka mgbatị na ngwaọrụ nkwado. Mpaghara nchebe mpaghara na ngalaba ọkụ.